December, 2018 | Otu Di na Nwunye
December 27, 2018 + Europe, France, Nhazi njem
Afọ ole na ole gara aga, Tracy dere akwụkwọ akụkọ banyere ahụmịhe anyị na Paris, bụ nke dị n'oge ahụ, zutere ọtụtụ nsogbu. Eziokwu ahụ bụ na anyị nwere obi abụọ na ma Paris ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ ma ọ bụghị na nrọ nrọ ọhụụ ọtụtụ ihe nkiri na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-ewe iwe ọtụtụ ndị njem Amerịka nakwa dị ka ụfọdụ na ... GỤKWUO
December 15, 2018 + Backpacking, Outdoors, Nhazi njem
Atụmatụ maka njem ndabere azụ
Ozugbo oge okpomọkụ na-agagharị, ị ghọtara na ị ga-achọpụta ihe ị ga-eme maka ezumike kwa afọ. Ị nwere ike ịga ala, ịzụta ogige maka ire ere na Fort Lauderdale, ma otu nde mmadụ ndị ọzọ nwere otu echiche ahụ ma ghara ikpochapụ ohere zuru ezu maka akwa akwa mmiri gị. Ma ọ bụrụ na ịchọrọ njem, gbalịa njem njem azụ. Mfe na-ama ụlọikwuu ... GỤKWUO
December 11, 2018 + Europe, Nri na ihe ọṅụṅụ, Hungarian, Hungary, Isi akwukwo, Ezi ntụziaka
Esi mee ka ezigbo Goulash Hungary - Dị nnọọ ka Budapest!
Mgbe anyị na-eme njem na Budapest, ọ ghọrọ ozi ozugbo anyị rutere n'ụgbọelu - chọpụta ihe dị adị n'ezie. Hụ Goulash Hungarian (ma ọ bụ, gulyas, dịka a na-akpọ ya), rie ya. N'ịbụ ndị tolitere na ndị nne na nna na-eri nri nke ezinụlọ ha n'eziokwu, ụdị goulash Americanzed bụ akụkụ nke ezinụlọ anyị. Ọ tọrọ ụtọ, na ... GỤKWUO
December 5, 2018 + Europe, Nyocha, Transportation, Nhazi njem
* Isiokwu a na-amasịbu "Review of Goeuro.com". Kemgbe ahụ, GoEuro abiaghachiri dị ka Omio.com, yana ọdịnaya n'ime isiokwu a ka emelitere iji gosipụta mgbanwe ahụ. Dị ka ndị njem na-agakarị, Omio.com bụ otu n'ime anyị-aga njem ngwaọrụ mgbe anyị nọ n'okporo ụzọ na onye anyị chere na ọ dị mkpa nyochaa ịkọwa saịtị ahụ, otu o si arụ ọrụ, na otu ị ga - esi rite uru na ... GỤKWUO
December 4, 2018 + Florida, North America, United States
Ihe 3 Na-eme Mgbe Orlando Na-eleta
Onye ọ bụla maara Orlando bụ otu n'ime ebe mara mma mgbe oge ezumike na ọchị dị. Obi abụọ adịghị ya na obodo a bụ ebe obibi na ogige ntụrụndụ kachasị mma na ebe nkiri gburugburu ụwa, eziokwu nke na-akpọ ọtụtụ ezinụlọ na ndị na-eto eto ịga leta ya kwa afọ. Ma obodo a dị ịtụnanya na-enye gị ọtụtụ ihe ọzọ iji hụ ma mee karịa ogige ntụrụndụ ndị a ma ama n'ụwa, ọ bụ ... GỤKWUO